အတွဲ (၁၄)၊ အမှတ် (၄၆)
စိန်ဂေဟာစူပါမားကတ်၏ လုပ်ငန်းသုံးဆိုင်ရာ အီးမေးလ်များတိုက်ခိုက်ခြင်း ခံနေရသည်ဟု စိန်ဂေဟာ စူပါမားကတ်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဟန်ဝင်းထွဋ်က ဆိုသည်။
၎င်းတို့အနေဖြင့် လုပ်ငန်းသုံးဆိုင်ရာ အီးမေးလ်တိုက်ခိုက်ခံရရုံသာမက စူပါမားကတ်အတွက် လွှင့်တင်ထားသည့် ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာများကိုလည်း တိုက်ခိုက်သူများ၏ ထိန်းသိမ်းမှုကိုခံခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။ “ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အီးမေးလ်တွေကို တိုက်ခိုက်ခံနေရလို့ Password တွေကို ပြန်ချိန်းနေရပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းထွဋ်က ပြောသည်။ စိန်ဂေဟာစူပါမားကတ်၏ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာကို ယခု ၁၅ ရက်နေ့၌ တိုက်ခိုက်သူများ လက်ဝယ်၌ အထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်ထိ ပြန်လည်ရရှိခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာ၌ စိန်ဂေဟာစူပါမားကတ်အနေဖြင့် ပရိုမိုးရှင်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း လွှင့်တင်ထားသော်လည်း စူပါမားကတ်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များသည် ၎င်းတို့လွှင့်တင်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ ထိန်းသိမ်းထားသူများ၏ လုပ်ရပ်သာဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ စိန်ဂေဟာစူပါမားကတ်သည် ၎င်းတို့၏ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီး အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ၎င်းတို့သည် သတင်းမှားများနှင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ စိန်ဂေဟာစူပါမားကတ်အနေဖြင့် Seingayhar အမည်ဖြင့်လွှင့်တင်ထားသည့် ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည့်နောက်ပိုင်း seingayhar.myanmar အမည်ဖြင့် ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာတစ်ခုကို ထပ်မံလွှင့်တင်ခဲ့သော်လည်း လွှင့်တင်ပြီး ၁၀ နာရီအကြာ၌ ထပ်မံထိန်းသိမ်းခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
၁။ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းစေသော သောကများ လျော့ချပေးခြင်း။
၂။ သွေးဖိအား လျော့ချပေးခြင်း (သွေးတိုး ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ ကျဆင်းခြင်း)။
၃။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေခြင်း။
၄။ အသက်ရှုအား ကောင်းစေခြင်း၊ အဆုတ်ကျန်းမာစေခြင်း။
၅။ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ စည်းချက်မှန်မှန် လှုပ်ရှားတတ်စေခြင်း။
၆။ သင်ယူလေ့လာမှု အားကောင်းစေခြင်း (အထူးသဖြင့် ကလေးများ)။
၇။ မှတ်ဥာဏ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း။
၈။ လူမှုဆက်ဆံရေး တိုးတက်စေခြင်း။
ပြည်တွင်း အခြေစိုက် သတင်းဌာန တစ်ခုဖြစ်သည့် eleven media group ၏ website မှာ ယခု မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကပင် DCMN Hacker အဖွဲ့၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွန့်နဲ့ အင်တာဗျူး စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ
ဦးမြတ်ခုိုင်ရေးတဲ့ ဗုိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွှန့်နှင့်အင်တာဗျူး စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲကုို ရန်ကုန်မြို့ ကရ၀ိတ် နန်းတော်မှာ ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာ၂၈ ရက်နေ့ နေ့လည်ပုိုင်းက ပြုလုပ်ပါတယ်။
ဦးမြတ်ခိုင်ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်နှင့် အင်တာဗျူး စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ဦးခင်ညွန့်၊
အဲဒီ စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ ကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဟောင်း ဦးခင်ညွှန့်လည်း တက်ရောက်ခဲ့ သလို တနေ့ကမှ အကျဉ်းထောင်က ပြန်လွတ်လာတဲ့ တချိန်က အာဏာရှင်ကြီး ဦးနေ၀င်းရဲ့ မြေးတဦးဖြစ် တဲ့ ဦးအေးနေ၀င်းလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အခုလို ဦးခင်ညွန့်အနေနဲ့ လူမြင်ကွင်းကို အရင်ကထက် ခပ်စိပ်စိပ်နဲ့ ခြေလှမ်းတွေလှမ်းလာတဲ့အပေါ် စိတ်ဝင်စားစရာအဖြစ်နဲ့ လူတွေက ပြောဆိုနေသံတွေလည်း ထပ်မံ ကျယ်လောင်လာနေပြန်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတော့ ပြန်စနေပြီလို့ ဆိုသူဆို၊ ရာဇဝင်ထဲက အဘကို ရာဇဝင်ထဲမှာပဲ ထားခဲ့ပါ ဦးမြတ်ခိုင်ရေ လို့ ဆိုသူတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဦးခင်ညွှန့်ကတော့ မီဒီယာတွေနဲ့ တရင်းတနှီးတချိန်တုန်းက အပြုံးတွေ ပြန်ဖော်ပြ လာတာ သတိထားမိပါတယ်။
တလောကပဲ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးထဲ ဦးခင်ညွှန့်တယောက် ခြေချဖို့ ပြင်ဆင်မှုတွေ ရှိနေပြီလို့ ကောလဟာလ
တွေလည်း ထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ တခါ ဦးခင်ညွှန့်က တိုင်းပြည်အတွက် သူ့မှာ အကြံကောင်းတွေ တောင်း ဆိုသူ ရှိလာရင် ပေးဖို့ အဆင်သင့်လို့ ပြောတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညန့်နဲ့ အင်တာဗျူး စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ဦးနေဝင်းရဲ့ မြေး၊ အေးနေဝင်း
စိန်၊ ကျောက်၊ တံဆိပ်ခေါင်း၊ ဒင်္ဂါပြား၊ ငွေစက္ကူများကို အတုအစစ်ခွဲခြားနိုင်မယ့် iPhone 5/5s Microscope (iPhone 5/5S Microscope 60x)
Tue, 11/26/2013 - 09:15
iPhone5တွင်တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်သော Microscope တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်သော အရာဝတ္တုကို အဆ ၆၀ အထိဆွဲကြည့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ စိန်၊ ကျောက်၊ တံဆိပ်ခေါင်း၊ ဒင်္ဂါပြား၊ ငွေစက္ကူများကို အတုအစစ်ခွဲခြားနိုင်ပြီး မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အသားအရေ အရေပြားအရေး အကြောင်းများ၊ သာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သော ပိုးပွှားများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး Phone ဖြင့်သာမကဘဲ ဗီဒီယိုပါရိုက်ကူး မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။ အလင်းရောင်မရှိသော အမှောင်ထဲတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်ရန် LED မီး ၃ လုံးပါဝင်မှာဖြစ်တယ်။ စိန်ကျောက်အရောင်းအဝယ် လုပ်သူများ၊ ငွေစက္ကူရောင်းဝယ်သူများ၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်း သုတေနလုပ်သူများ၊ ဆရာဝန်များ အတွက်အထူး အသုံးဝင်မှာဖြစ်တယ်။ ဈေးနှုန်း ၃၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် My Data Online Store ဖုန်း - ၀၉-၅၀၄၆၀၈၅၊ ၀၉-၅၁၉၆၇၂၄ သို့ ဆက်သွယ် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့လည်း အသုံးတည့်နိုင်လောက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားအတို
(1) Stand in line!
(2) Don't jump the queue!
(3) More's the pity!
(4) Easy come,easy go!
လွယ်လွယ်ရ ၊ လွယ်လွယ်ကုန်။
(5) Shop aroundabit!
(တစ်ခုခု မ၀ယ်ခင် ဈေးကွက်လိုက်မေးတာ)
(6) How's life?
(7) Same as ever!
(8) I'm down and out!
(9) Now happy,now sad!
(10) Nice going!
(11) I don't know what he's playing at!
သူ ဘာတွေ လုပ်နေမှန်းကို မသိပါဘူးကွာ။
(12) Great minds think alike!
(13) Thank Heavens!
(14) Not much!
(15) Quite reasonable!
ဩ​စ​တြေး​လျ​နိုင်​ငံ​မှာ ​အ​လည်​အ​ပတ်​ရောက်​ရှိ​နေ​တဲ့ ​မြန်​မာ့​ဒီ​မို​က​ရေ​စီ​ခေါင်း​ဆောင် ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်း​စု​ကြည်​က ​ဩ​စ​တြေး​လျ ၀န်​ကြီး​ချုပ် ​တို​နီ​အ​ဘောက်​နဲ့ ​တွေ့​ဆုံ​ခဲ့​ပါ​တယ်။
​ဒေါ်​အောင်​ဆန်း​စု​ကြည်​ဟာ ​ဩ​စ​တြေး​လျ ၀န်​ကြီး​ချုပ် ​တို​နီ​အ​ဘောက်​နဲ့ ​ဒီ​နေ့ ​တွေ့​ဆုံ​ခဲ့​တာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
​တွေ့​ဆုံ​အ​ပြီး ​ပြု​လုပ်​တဲ့ ​သ​တင်း​စာ​ရှင်း​လင်း​ပွဲ​မှာ ​ဩ​စ​တြေး​လျ ၀န်​ကြီး​ချုပ် ​တို​နီ​အ​ဘောက်​က ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်း​စု​ကြည်​ကို ​ကြို​ဆို​တဲ့ ​အ​ကြောင်း​နဲ့ ​တ​ချိန်​က ​သူ ​အ​တိုက်​အ​ခံ ​ဖြစ်​စ​ဉ်​က​လည်း ​တ​ခါ​တ​လေ ​စိတ်​အ​နှောင့်​အ​ယှက် ​ဖြစ်​ခဲ့​ဖူး​သ​လို ​တ​ခါ​တ​လေ ​စိတ်​ပျော်​ရွှင်​ဖူး​တဲ့​အ​ကြောင်း ​ပြော​ပါ​တယ်။
တရားမဝင် မြန်မာအလုပ်သမား ရှစ်ဦးအား ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးအပ်
ကျိုင်းတုံ ၊ ၂၈-၁၁-၂ဝ၁၃
တာချီလိတ်မြို့ တာချီလိတ် - မယ်ဆိုင် ၊ အမှတ်(၁) ချစ်ကြည်ရေး တံတားတွင် နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီက တရားမဝင် မြန်မာ အလုပ်သမား ရှစ်ဦးအား ထိုင်းနိုင်ငံ မှ ပြန်လည် လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးရုံး မှ ဦးစီးအရာရှိ ရဲဗိုလ်ကြီး နက်ထဝပ် ဆဲန်ဒူးအန်း ဦးစီး တပ်ဖွဲ့ဝင် လေးဦးမှ မြန်မာ အလုပ်သမား အမျိုးသား ရှစ်ဦးအား နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် တရားဝင် ပြန်လည် လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ရာ တာချီလိတ်မြို့ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး နှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန မှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဝင်းအောင် နှင့်အဖွဲ့မှ စနစ်တကျ စိစစ် လက်ခံခဲ့သည်။
အဆိုပါ အလုပ်သမား များအား တာချီလိတ်မြို့ ၊ မဟာ မြတ်မုနိ ဘုန်းကြီးကျောင်း တွင် ခေတ္တ နေရာချ ထားပြီး ပူးပေါင်း အဖွဲ့ဖြင့် မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးခြင်း ၊ စစ်မေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရာ ၄င်းတို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်ပြီး နေထိုင်ခွင့် ကဒ်ပြားများ မရှိခြင်း ၊သတ်မှတ်ရက် ကျော်လွန် နေထိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် ရှောင်တခင် စစ်ဆေးချက် အရ ဖမ်းဆီးခံ ရခြင်းဖြစ်ပြီး လူကုန်ကူး ခံရခြင်း မရှိကြောင်း သိရှိရသဖြင့် တာချီလိတ်မြို့ ၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ တစ်ဆင့် မိဘရပ်ထံ သို့ ညနေပိုင်း တွင် ပြန်လည် စေလွှတ် ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာမှ မော်တော်ဘုတ်များဖြင့် စည်ကားနေသော တက်ကနက် ကုန်သွယ်ရေး ဆိပ်ကမ်း။
(နိရဉ္စရာ- ၂၈ နိုဝင်္ဘာလ ၂၀၁၃)/ မောင်အေး
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ တရားမ၀င် သစ်များ မှောင်ခို တင်သွင်းလာသည့် ဘုတ်တစ်စီးနှင့် လူ ၁၀ ဦးကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရေတပ်က ဖမ်းဆီးလိုက်သည်ဟု သိရသည်။
၎င်းမြန်မာ သစ်တင် မော်တော်ဘုတ်အား ယမန်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက မြန်မာ အခေါ် အုန်းကျွန်း၊ ဘင်္ဂလာ အခေါ် စိန့်မာတင်ကျွန်းမှ တစ်မိုင်ခန့် အကွာ ပင်လယ်ပြင်တွင် ဘင်္ဂလာရေတပ်မှ ဖမ်းဆီးလိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။
ယခု မော်တော်ဘုတ် ပေါ်မှ ဖမ်းမိသည့် သစ်တန်ဖိုးမှာ ကာလ ပေါက်ဈေး ဘင်္ဂလာ တာကာငွေ (၁၀) ကုဋေ ကျော်ဖိုး (မြန်မာ ကျပ်ငွေနှင့်ဆိုလျှင် ကုဋေ ၁၀၀ ဖိုးခန့်) ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသူ ၁၀ ဦးကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရေတပ်မှ ယခုအခါ တက်ကနက် ရဲစခန်းသို့ လွဲပြောင်း လိုက်ပြီဖြစ် ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားသည်။
သို့သော်လည်း မော်တော်ဘုတ်နှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူများမှာ မြန်မာနိုင်ငံ မည်သည့် အရပ်က ဖြစ်ကြောင်းကို ဘင်္ဂလာ အာဏာပိုင်များက တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားမူ မရှိကြောင်း သိရသည်။
၎င်းသတင်းကို ကော့စ်ဘဇားမြို့ မှ ထုတ်ဝေသော ဒေသသတင်းစာများတွင်လည်း ယနေ့ ဖော်ပြကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများသည် စိတ်ချ ယုံကြည်ရသော အခြေအနေ မရှိကြောင်း မြန်မာ့ ငါးသယံဇာတကို သုတေသန ပြုလုပ်ရန် ရောက်ရှိနေသည့် နော်ဝေ ငါးသုတေသန ယာဉ် R/V Dr Fridtjof Nansen ၏ ကနဦး ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် ကျန်ရှိသည့် ငါး၊ ပုစွန် သယံဇာတ ပမာဏနှင့် ငါး၊ ပုစွန် သယံဇာတ မပြုန်းတီးရေးအတွက် တင်းကျပ်သော စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်လျက် ရှိသည်ဟု အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်က ထောက်ပြသည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံက ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အတွင်း တစ်နှစ်လျှင် ငါးဖမ်းဆီးမှုသည် တန်ချိန် ၁ ဒသမ ၃ သန်းမှ ၁ ဒသမ ၈ သန်းအထိ ရှိမည်ဟု ဖော်ပြထားပြီး ဒေသတွင်း နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အတွင်း ငါးဖမ်းဆီးမှု အများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ပင်လယ်ပြင် သယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲမှု တစ်ခုအဖြစ် လာမည့်ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ နိုင်ငံခြား ငါးဖမ်းသင်္ဘောများကို မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် ငါးဖမ်းခွင့် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ပထမပတ် အတွင်း မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာခဲ့သည်။
မြန်မာ့ငါးလုပ်ငန်းတွင် သုတေသန အားနည်းခြင်း၊ စာရင်းအင်း အတိအကျ မရှိခြင်းနှင့် အစိုးရ၏ မူဝါဒများ အားနည်းခြင်းတို့သည် ငါးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် အဟန့်အတား ဖြစ်စေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်၏ အစည်းအဝေးများတွင် လုပ်ငန်းရှင်များက ထောက်ပြကြသည်။
ငါးလုပ်ငန်း စာရင်းအင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြီးခဲ့သည့် တပ်မတော်အစိုးရ လက်ထက်တွင် ငါးမွေးမြူရေးကန်များ အထွက်နှုန်း လျော့ကျမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ အချက်အလက်များကို ဝန်ကြီးဌာနထံသို့ တင်ပြရာတွင် အမှန်အတိုင်း တင်ပြ၍ မရသောကြောင့် စာရင်းပိုပြခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ရကြောင်း ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနမှ အကြီးတန်း အရာရှိအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့ပြီး လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်၌ အကြံပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသူ တစ်ဦးက ထောက်ပြသည်။
သန်လျင်မြို့နယ်၊ (၆)လမ်းသွားလမ်းဆုံတွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်နှင့် သစ်လုံတင်ယာဉ်တို့ တိုက်မိရာမှ တစ်ဦးသေ၊ (၂၈)ဦးဒဏ်ရာရရှိ
၂၇.၁၁.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၁၃၀၀အချိန် သန်လျင်မြို့နယ်၊ သန်လျင်-သုံးခွ ကားလမ်းအတိုင်း သုံးခွဘက်မှသန်လျင်ဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း နေလင်း (ဘ)ဦးကြွက်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့နယ်နေသူ မောင်းနှင်လာသော ၁စ/---- ဟွန်ဒိုင်းအမျိုးအစား သုံးခွ မှန်လုံခရီးသည်တင်ယာဉ်သည် သန်လျင်မြို့နယ်၊ (၆)လမ်းသွားလမ်းဆုံအရောက်တွင် ဒဂုံသီလ၀ါ လမ်းအတိုင်း မြောက်မှတောင်သို့ ယာဉ်မောင်း သူရအောင်(ဘ)ဦးထွန်းရီ၊ စစ်ပင်ကွင်းရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့နယ်နေသူ မောင်းနှင်လာသော ၆ဂ/---- ဆမ်ဆောင်းအမျိုးအစား သစ်လုံးတင်ယာဉ်နှင့် တိုက်မိခဲ့ကြရာ သစ်လုံးတင်ယာဉ်မှာတိမ်းမှောက်သွားပြီး သုံးခွမှန်လုံခရီးသည်တင်ယာဉ်မှာ လမ်း၏၀ဲဘက်မြေနိမ့်ပိုင်းသို့ထိုးကျသွားခဲ့ သဖြင့် ယာဉ်မောင်း နေလင်းမှာ အခင်းဖြစ်နေရာ၌ သေဆုံးသွားပြီး ယာဉ်မောင်း သူရအောင်တွင် ၀ဲဂျိုစောင်းပေါက်ပြဲ၊ ၀ဲဒူးနာကျင်ဒဏ်ရာများရရှိသဖြင့် သန်လျင်ဆေးရုံတွင် အတွင်းလူနာအဖြစ် တက်ရောက်ကုသလျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် သုံးခွမှန်လုံခရီးသည်တင် ယာဉ်ပေါ်ပါ ခရီးသည် ဦးစန်းဦး ပါ ကျား (၆)ဦးနှင့် မ(၄)ဦးတို့တွင် ဖူးယောင်ပေါက်ပြဲ ဒဏ်ရာများ အသီးသီးရရှိသဖြင့် သန်လျင်ဆေးရုံတွင် အတွင်းလူနာ (မစိုးရိမ်ရ)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မပုလဲရတနာမြင့် ပါ(၁၇)ဦး တွင်လည်း ဖူးယောင်ပွန်းပဲ ဒဏ်ရာများရရှိသဖြင့် သန်လျင်ဆေးရုံတွင် ပြင်ပလူနာများ(မစိုးရိမ်ရ) အဖြစ်ဆေးဝါးကုသခံနေရ သောကြောင့် ယာဉ်မောင်း နေလင်းနှင့် သူရအောင်တို့အား သန်လျင်မြို့မရဲစခန်းယာဉ် (ပ)၁၅၆/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၂၇၉/၃၃၇/၃၃၈/၃၀၄-ကဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အကယ်ဒမီဆု အတွက် ဆန်ကာတင် ရုပ်ရှင်ကားကြီး ၇ ကား ရွေးချယ် လိုက်ပြီဖြစ်
အခု လာမယ့် အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲမှာ အကယ်ဒမီဆု အတွက် ဆန်ကာတင် ရုပ်ရှင် ကားကြီး ၇ ကားကို ရွေးချယ် လိုက်ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်
အစည်းအရုံးမှ တာဝန်ရှိသူရဲ့ ပြောကြား ချက်အရ သိရပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ ကျင်းပမယ့် အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲ ကိုတော့ သုဝဏ္ဏ အားကစားကွင်း ရုံ ၁ မှာ ကျင်းပ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အကယ်ဒမီ ပေးပွဲကို ယခင်က နေပြည်တော်မှာ ၃ နှစ်တာ ကာလအထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မှာ ပြန်လည် ကျင်းပမှုဟာ အခုအခါ မှာတော့ ၂ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခု ကျင်းပမယ့် အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲ အတွက် ဆန်ကာတင်ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား တွေကတော့ “လက်ပံ”၊ “မော်ကင်းဥဒါန်း”၊ “ဥ”၊ “ကယန်းအလှ”၊ “တိမ်မင်းသမီးဒဏ္ဍာရီ”၊ “အမုန်းမီးတောက်”နဲ့ “အမွေခံထိုက်စေ”ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုလက်ရှိ မြန်မာရုပ်ရှင် လောကမှာ ရုပ်ရှင် လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗီဒီယိုနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ ဈေးကွက်ဟာ ပျက်စီးမှုတွေ ရှိနေပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း ထပ်ပြီး ယခုလို မဖြစ်ပေါ် စေဖို့နဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများကို ဖလင်နဲ့ ရိုက်ကူးမှုမှ ဒစ်ဂျစ်တယ် စနစ်နဲ့ ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်နိုင် ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ပြုလုပ်လျက် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထားဝယ်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်သင်တန်းများသို့ ၀င်ခွင့်ရသူများစာရင်း ယနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာ
၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် ၊ထားဝယ်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်သင်တန်းများသို့ ၀င်ခွင့်ရသူများစာရင်းကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ပထမနှစ်သင်တန်းများကို ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ရာ
ယနေ့ မှစ၍ ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
တယ်လီနောမြန်မာက အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် မြန်မာဝန်ထမ်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်အပ်ထားဟုဆို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ စတင်ရန် ပြင်ဆင်နေသော တယ်လီနောမြန်မာက ကုမ္ပဏီ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် ဝန်ထမ်းများ၏ ထက်ဝက်ခန့်ကို မြန်မာလူမျိုးများ ခန့်အပ်ထားကြောင်း တယ်လီနောမြန်မာမှ ဝန်ထမ်းရေးရာ အရာရှိချုပ် Ms.Tipayarat Kaewsringarm က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ လာပြီးနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားက တစ်ဝက်။ ပြီးရင် မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေလည်း ပါတယ်။ အဲဒီမှာက နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်း ပါသလို မြန်မာပြည်တွင်းက မြန်မာတွေလည်း ပါတယ်။ တစ်ဝက်စီလောက် ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း (Management Level) အရာရှိ ၂၅ ယောက်ကို သြဂုတ်လမှ အောက်တိုဘာလအတွင်း ခန့်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ကျွမ်းကျင်အဆင့် (Expert Level) ဝန်ထမ်း ၁၆၀ ခန့် ရှာဖွေခန့်ထားမည် ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ဝန်ထမ်း ၉၀ နီးပါး ခန့်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း တယ်လီနောမြန်မာထံမှ သိရသည်။
ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ကုန်အထိ အောက်ခြေအဆင့် (Entry Leve) ဝန်ထမ်း တစ်ထောင်ခန့် ထပ်မံ ခေါ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး အတွေ့အကြုံနှင့် ပညာအရည်အချင်း ကန့်သတ်ချက် အများအပြား မလိုအပ်ကြောင်း အဆိုပါ ကုမ္ပဏီထံမှ သိရသည်။
မန္တလေးမြို့ ရေ၊ အမှိုက်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၂သန်း ကူညီ
(မန္တလေးမြို့ရှိ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရာ နေရာတစ်ခုအား တွေ့ရစဉ်)
မန္တလေးမြို့၏ ရေပေးဝေရေးစနစ်၊ အမှိုက်သိမ်းဆည်းရေး လုပ်ငန်းများ၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် ပြင်သစ်နိုင်ငံက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၂ သန်း (ယူရိုငွေ ၉၆၉၀၀၀) ကူညီပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီထံမှ သတင်းရရှိသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Sasege Engirenerring ကုမ္ပဏီက မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသို့ ယင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အကူအညီပေးခြင်းဖြစ်ကာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို မြို့တော်စည်ပင် ၀န်ထမ်းများအား ကဏ္ဍအလိုက် သင်ကြားပို့ချသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"အဓိကကတော့ MRT (Mass Rapit Transport ) လူအများ သွားလာရေးစနစ်ကို ကောင်းမွန်အောင် ပြောင်းလဲချင်တယ်။ လက်ရှိမန္တလေးရဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့ ဘတ်စ်ကား ပြေးဆွဲစေတာမျိုး လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ် " ဟု လမ်းတံတားဌာနမှူး ဒေါ်ခင်မေဌေးက ဆိုသည်။
Green City အတွက် မန္တလေးမြို့ကို အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ အဆက်မပြတ် လာရောက်လေ့လာ ဆွေးနွေးလျှက်ရှိရာ အခြားနိုင်ငံအသီးသီးမှလည်း ပါဝင်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မန္တလေးမြို့၏ ယင်းလုပ်ငန်း သုံးခုအတွက် အကူအညီပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြို့တော်စည်ပင်ကော်မတီဝင် ဦးထွန်းကြည်က ပြောကြားခဲ့သည်။
"လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအပြင် မြို့ရဲ့ အမှိုက်သိမ်းစနစ်နဲ့ ရေပေးဝေရေးတွေအတွက်ပါ လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာတွေကို မြို့တော်စည်ပင်က ကဏ္ဍအလိုက် အင်ဂျင်နီယာတွေကို သင်ကြားပေးသွားမယ်။ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။ အခုကူညီတာက Green City နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ပြင်သစ်နိုင်ငံက ကူညီတာပါ" ဟု ကော်မတီဝင် ဦးထွန်းကြည်က ပြောကြားသည်။
အဟမ်း... ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၊ ခရိုနီများ စိတ်ဝင်စားမယ့် သတင်းကောင်းတခု ရှိနေပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံ - စည်သူလင်း / ဧရာဝတီ)
ရွှေဂုန်တာဝါ ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းနေရာမှာ "မြေကြီး အခမဲ့ပေးသည်" ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို ခပ်ကြီးကြီး တွေ့ကြရမှာပါ။
ဒီပုံကို ကူးပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၊ ခရိုနီများကို ဝေသင့်ပါတယ်။
ဘယ်နေရာမှာလဲ မေးရင် ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းပေါ်မှာလို့သာ ပြောလိုက်ပါ။ အပိုင်က ကျောက်တံတားမြို့နယ်ထဲမှာပါ။
"မြေကြီး အခမဲ့ပေးသည်" တဲ့။
ပျော်ပျော်ကြီး သွားယူကြပေတော့း)
မြန်မာ့တပ်မတော် နဲ့ ခရိုနီများက တို့အိမ်မှတ်ပါ တို့ယာမှတ်ပါ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ညည်းပြီး မြန်မာပြည်တဝန်း မြေသိမ်းခဲ့ကြတာ ဆယ်နှစ် ဆယ်မိုး မကတော့ဘူးမဟုတ်လား။
တပ်မတော်သည်သာ အမိ၊ တပ်မတော်သည်သာ အဖ ဆိုတော့ သားသမီးဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေလည်း ထုံးစံအတိုင်း ငြိမ်ခံ၊ ငုံ့ခံခဲ့ကြရတာ နှစ်ပေါင်း မနည်းပေဘူး။
ကံကောင်းထောက်မလို့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကြီး ပေါ်လာတယ်။ ဒီဥပဒေအရ ဦးသိန်းစိန်ကြီးအစိုးရဆိုတာ ပေါ်လာတယ်။
ဒီအစိုးရလက်ထက်ရောက်မှ မြေသိမ်းတာတွေပြန်ပေးဖို့ အော်ပြောခွင့်ရလာတယ်၊ လူတွေ သိကုန်ကြတယ်။
သိမ်းထားတဲ့မြေ ပြန်ပေးမှာပါကွာ လို့တော့ ပြောတာပဲ။ ပြောပေမယ့် သိပ်ယုံရတာမဟုတ်ဘူး။
မလွှဲမရှောင်သာ သိမ်းထားမိတဲ့မြေတွေကို ပြန်ပေးမယ်ဆိုလည်း မြန်မြန်ပေးသင့်တာပေါ့။
သိပ်....ရချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အထက်ကပုံမှာ ပါတဲ့အတိုင်း ရွှေဂုန်တာဝါ ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းနေရာကိုသွားကြပေါ့ဗျာ လို့ ဆိုရမယ် ထင်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးသည် နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်အရေးကြီးပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ တစ်ခုတည်းသာမက တရားဝင်ပါတီအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့် အားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးရမည့်ကိစ္စဟု ယုံကြည်ကြောင်း သမ္မတ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့နှင့်တွေ့ဆုံရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အပေါ် ၎င်းတို့နှစ်ဦးက တုံ့ပြန်လိုက်ကြောင်း သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားသည်။
“ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စဟာ နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် အရေးကြီးကိစ္စဖြစ်သလို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သာမက တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော နိုင်ငံရေးပါတီ ၅၈ ခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက် သက်ဆိုင်သူအားလုံး ပါဝင်ဆွေးနွေးရမည့်ကိစ္စလို့ သမ္မတနဲ့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့က ယုံကြည်ပါတယ်”ဟု ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် ယခုအချိန်သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထားပြီး အဆိုပါကော်မတီ အစီရင်ခံစာကို ဒီဇင်လာလကုန်တွင် တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာမတင်သွင်းမီ အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ၏ တွေ့ရှိချက်များနှင့် ကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ ကြောင့် ယင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာတင်သွင်းပြီးမှသာ တွေ့ဆုံမှုကို စဉ်းစားသင့်သည်ဟု ယူဆကြောင်း သမ္မတနှင့်ကာချုပ်တို့ က သဘောတူသည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ရေးကို စီစဉ်ပေးရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ မေတ္တာရပ်ခံစာ ပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းစာအပေါ် ၎င်းတို့နှစ်ဦးက ယခုကဲ့သို့ တုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
“တပ်မတော်ရယ်၊ အစိုးရရယ်၊ လွှတ်တော်ရယ် သွေးစည်းညီညွတ်ပြီး တိုင်တိုင်ပင်ပင်ပြုလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုးနဲ့ ဒေါ်စုက တောင်းဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ တပ်မတော်ကတော့ သီးခြားသဘောထားမျိုးဖြစ်နေတယ်။ တပ်မတော်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ ခံယူထားတာကြောင့် တွေ့ဖို့မလိုဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်”ဟု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးမောက်က ပြောကြားသည်။
“တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာ ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်ပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးလုပ်ကြရင် ကောင်းမယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးလဲဆိုတာ နားမလည်ဘူး။ သေချာတာကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့က အဖွဲ့အစည်းအားလုံးက သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပြီးသား ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖြစ်မလာဘူးဆိုရင် အစိုးရက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လိုလိုလားလားရှိရဲ့လားဆိုတာ စိတ်ပူစရာဖြစ်လာတယ်” ဟု ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ဦးဂျင်မီက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
မာလီ အာဏာသိမ်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကို ဖမ်း၊ စစ် အာဏာသိမ်းမှု ကြောင့် မာလီမှာ ကစင့်ကလျား ဖြစ်